स्थानीय सरकार र कृषिको भविष्य - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
- कृष्णप्रसाद पौडेल
स्थानीय सरकारलाई कृषि लगायत जीवनयापनका आधारभूत स्रोतहरूको प्रबद्र्धन गर्नु नेतृत्व र प्रभावकारी व्यवस्थापनको उपयुक्त थलो बनाउनुपर्छ ।
जेष्ठ ५, २०७४-पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र समृद्धिका प्रस्तावले भन्दा राजनीतिक साँठगाँठले नै बढी महत्त्व पायो । सदाझैं यसपटक पनि पार्टीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतापत्र होउन् वा उम्मेदवारका घोषणामा सबैले नेपाललाई समृद्ध बनाउने महत्त्वाकांक्षा बाँडेका छन् । तर कसरी भन्नेमा सबै कुहिरोको कागजस्तै हराएका छन् । यिनमा नेपाली जनजीवनको मुख्य आधार कृषि सुधारको ठोस योजना कतै देखिएन । आफ्नो मात्र बखानले भरिएका पार्टीका कुण्डलीमा लेखिएका अन्य वाचा पुरा न/भएको हेर्नु त केही समय पर्खिनुपर्ला, तर वाचा नै नगरेको क्षेत्रमा उल्लेख्य केही काम होला भनी कसरी पत्याउने ? प्रतिबद्धता पत्र नामका शव्दजालले भरिएका आश्वासनका पेटारा खोल्दा यस्तै देखियो ।
सबैले बाटो, बिजुली, उद्योग र पर्यटनलाई विकासका मुख्य आधार बताएका छन् । यसपछि भने कृषिको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण सबैको साझा थेगो बनेको छ । तर यिनमा नेपालको खाद्य, भूमी र कृषिका सवाललाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट खाका र रणनीतिक प्रस्ताव भने निकै कमजोर छ । स्थानीय तहमै व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका प्रस्ताव र यिनको कार्यान्वयनका लागि लिइने स्थानीय तहको रणनीतिक ढाँचा कसैले प्रस्तुत गरेका छैनन् । यो क्षेत्र फेरि पनि केन्द्रीकृत योजना र कृषि कर्मचारीको भरमा छोड्न खोजेको देखिन्छ । यो कृषि क्षेत्रको भविष्य अझ अन्योलग्रस्त हुने अशुभ संकेत हो ।
नेपाली कृषि किन बिग्रेको होला र सपार्नु के गर्ने भन्ने चासो, चिन्तन र सोच त धेरै परको कुरा भयो । भरपेट र सन्तुलित तर विषादिरहित खानेकुरा खान पाउने नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ठोस योजनाको प्रस्तावसमेत कतै भेटिएन । भूमिहीन, मोही र साना किसानका अधिकारका प्रश्नमा ५ दशकदेखिका आश्वासनमात्र दोहोर्‍याएका छन् । गाउँ या नगरपालिकामा बिग्रेको खेती सुधार्ने र विदेशिएका युवालाई खेतीपातीमा ल्याउने उपयुक्त योजनाबारे केही बोल्न आवश्यक ठानेनन् । साथै माटो र मानव स्वास्थ्य, स्वच्छ खेतीपाती र स्वास्थ्य खानाको मर्म आत्मसात गरेको कतै भेटिएन । खानामा विष छ भन्ने थाहा पाउँदा तपाई खानुहुन्छ या खानुहुन्न ? भन्ने जस्तो अहं सवालमा समेत कोही मौन बसेका भेटिए भने कसैले १० र २० वर्षमा भन्छौं नि अहिले के हतार छ र ? भनेर आफ्नो ज्ञान तथा विवेकको सीमा देखाइदिए ।
अन्दाज गरेभन्दा धेरै विकराल बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असरले अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषिक्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित हँ‘दै गएको छ । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो पर्वतीय कृषि निकै जोखिममा परेको छ । तर यो कुरा धेरै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले अहिलेसम्म भेउ पाएकै देखिएन । योसँगै बदलिएको विश्व परिवेशमा कृषि प्रबद्र्धनको कुनै स्पष्ट ढाँचा र रणनीतिक योजना बिनाको व्यावसायिक, आधुनिक र औद्योगिक कृषिको रटान यसैको परिणाम हो ।
हाम्रालागि तितो यथार्थ के हो भने नेपालको समृद्धि यसको विशेषतामा आधारित कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धन र विस्तारमा मात्र सम्भव छ । नेताहरूले प्राथमिकता भन्ने गरेका सिंचाइ, सडक, विद्युत, लघुउद्योग त यसका सहयोगी पूर्वाधार मात्र हुन् । अहिलेको मूलत: हरित क्रान्तिमा आधारित कृषिभन्दा भिन्न तरिकाले यस क्षेत्रको प्रबद्र्धनको सोचले मात्र रसायन र विषादि बिनाको खाना खाने, विकराल बन्दै गएको खाद्यान्नको आयात घटाउने, सबै नेपालीको आम्दानी बढाउने, रोजगारी र जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय जोखिम घटाउने कुरा एकसाथ गर्नु सम्भव छ । यसका लागि अहिलेको रसायन र विषादिमा आधारित बाहिरी उच्च लगानीको हरित क्रान्ति कृषि प्रणालीको ढाँचालाई तत्कालै र्फेनु पर्नेछ ।
हाम्रो आफ्नै विशेषतामा आधारित रसायन र विषादिरहित कम बाहिरी स्रोत, प्रविधि र लगानीको एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएर मात्र खाद्यमा आत्मनिर्भर तथा तुलनात्मक कृषि उपजको प्रबद्र्धनबाट रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन गरी खर्च घटाउने र निर्यात गरी पर्याप्त आम्दानी बढाउने कुरा सम्भव छ । लामो समयदेखि गरिएको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्वभरि नै छरिएका अगुवा किसानका अनुभवले यस्तो कृषि प्रणालीमा उत्पादनशीलता र आम्दानी दुबै बढी भएको पाइएको छ । यस्तो एकीकृत कृषि प्रणालीमा मात्र जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू कम हुन्छ । त्यसैले यस्तो प्रणाली सबैतिर अपनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्टिय समुदायले सुझाउन थालेका छन् ।
साथै तुलनात्मक रूपमा सम्म परेको मैदानी भागमा जस्तो यान्त्रीकरण हुन नसक्ने धेरैजसो पहाडी भूधरातल भएको हाम्रो मुलुकले सौर्य तथा अन्य पुन: उत्पादनशील ऊर्जा र मानवश्रममा आधारित प्रांगारिक खेतीपाती अपनाएर खनिज स्रोतमा आधारित कृषिको उदाहरणीय विकल्प प्रस्तुत गर्दै रसायन तथा विषादिमुक्त खाद्य तथा कृषि प्रणालीको अगुवा बन्न सक्छौं । यसतर्फ उचित ध्यान दिनुको साटो आधुनिक भनिने मैदानी कृषि प्रणालीको नक्कल गरेर हामी अरूले गरेका गल्तीबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्नेमा तिनै गल्ती दोहोर्‍याउने मुर्खता गरिरहेका छौं ।
विश्व परिवेशमा आएका फेरबदललाई ठिक ढंगले पहिचान गरी हाम्रो भू–अर्थ–राजनीतिको यथार्थलाई वस्तुपरक ढंगले ठम्याउने र सन्तुलित तर पारस्पारिक लाभका लागि सहकार्य गर्नु प्रतिबद्ध हुने हो भने हाम्रा सम्भावनाहरू ढोकैमा आइपुगेका छन् । उदाहरणका लागि भर्खरै चीनको प्रस्तावमा गरिएको ‘एउटा पाटो एउटा बाटो’ योजनामा हाम्रो सहभागिता पर्यावरणय कृषि प्रबद्र्धनको महत्त्वपूर्ण आयाम हो । विडम्बना, विश्व जोड्ने ठूला कुरा गरेर रमाउने नेताहरू आम नागरिकको हातमुख जोड्न, खेतीपाती र खानेकुरा जोड्न, जीविकोपार्जन र आफूले बाँडेको समृद्धिका सपना जोड्न भने हिचकिचाउने गरेका छन् । यसबारे नागरिक वा राजनीतिक वृत्तमा कुनै सार्थक बहस अहिलेसम्म हुनसकेको छैन ।
अहिलेको कृषिलाई फेर्नु स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा आधारित संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्छ । स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो परम्परागत कृषिको अभ्यासलाई उन्नत बनाउँदै लैजाने कुराको विकल्प छैन । तर यो कुरामा बुझ पचाएका कृषिका विज्ञहरू, पार्टी तथा नेताहरू आफैं गरेर खाने किसानलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सघाउनेभन्दा ‘व्यावसायिक हुन नसकेका’ भन्ने आरोप लगाउँदै अझै पर धकेल्न उद्यत छन् । किसानको संख्या घटाउने भाषण यसको एउटा लाजमर्दो उदाहरण हो ।
अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन बढाउने कुराले तत्कालका लागि सबैले स्वस्थ खाना खान पाउनेमात्र हैन, स्थानीय तहमा रोजगारी, आम्दानी र कृषिजन्य उपजको आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय ढऽकऽटीको बचतमा समेत ठूलो योगदान पऽग्छ भने दीर्घकालीन रूपमा हामी सधैंका लागि उपयुक्त कृषि प्रणाली विकासको जगसमेत निर्माण गरिरहेका हुनेछांै । यस अवधिमा रोजगारी र आम्दानी बढ्ने अन्य वैकल्पिक क्षेत्रको विस्तार हुनसके स्वाभाविक रूपमा धेरै किसान कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुनेछन् । त्यतिबेला मात्र उपयुक्त कृषि प्रविधि र यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै कम श्रमको कृषि अपनाउने बाटो समात्न सकिन्छ ।
तसर्थ अहिलेकै अवस्थामा साना किसानमैत्री कृषि पहिलो सर्त बनाउन छाडेर कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको हावादारी कुरा गर्नु‘को कुनै तुक छैन । यस्ता उटपट्याङ कुरामै रमाएकोबाट पनि पार्टी र तिनलाई सुझाव दिने विज्ञहरूको वैचारिक धरातल प्रस्ट हुन्छ । अझै पनि यिनले खाद्यका लागि कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको उत्पादन र प्रबद्र्धन गरेर मात्र हामी सधंैका लागि समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छौं भन्ने कुरा राम्रोसँग भेउ नै पाएका छैनन् ।
यसरी हेर्दा कहालीलाग्दो खाद्यान्नको आयात, विषाक्त खानेकुरा, यसबाट स्वास्थ्यमा देखिएका जटिलता, प्रदूषित स्रोत, प्रकृतिको अति दोहन, भूमिको खण्डीकरण र भूउपयोगको बेथिति समाधान स्थानीय सरकारको कार्यसूची हुनुपर्ने हो । स्थानीय सरकारलाई कृषि लगायत जीवनयापनका आधारभूत स्रोतहरूको प्रबद्र्धन गर्नु नेतृत्व र प्रभावकारी व्यवस्थापनको उपयुक्त थलो बनाउनुपर्ने हो । तर अहिले प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र नपरेको देख्दा आशा गर्ने ठाउँ भने धेरै देखिँदैन । आशा गरौं, यस विषयमा चासो राख्ने धेरै सक्षम र योग्य उम्मेदवारले जित्नेछन् । र उनीहरूले स्थानीय तहमा कृषि विकासका लागि पहल गर्नेछन् । यस अभियानमा हामी सबैले साथ दिने अठोट गरे केही कुरा अवश्य फेरिनेछ । नत्र पार्टी र नेताहरूले बनाएको नेपालको समृद्धिको राजमार्ग उनीहरूले नै पालनपोषण गरेका असारे ठेकेदारले टालटुल पारेको तर सधैं हिलाम्मे भैरहने काठमाडौंको बाटोजस्तो मात्र भइरहनेछ । त्यस्तो बाटो हिँडेर नेता तथा पार्टीलाई धारेहात लगाउँदैमा हाम्रो समृद्धिको सपना पुरा हँ‘दैन । आफू पनि सक्दो योगदान गर्नु प्रतिबद्ध बनौं ।
पौडेल खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् ।
दलित महिलालाई मौका ›
सामान ढुवानी सहज बनाऊमंसिर ४, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
निर्वाचन निष्पक्षताको प्रश्नमंसिर ४, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
चुनाव, वाचा र पर्चामंसिर ४, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
एक–अर्काबाट सिक्ने कुरामंसिर ४, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
एन्टिबायोटिक्स दुरूपयोगविरूद्ध जनचेतनामंसिर ४, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
खोस्टो नबनोस् चुनावी घोषणापत्रमंसिर ४, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
कोही नहार्ने यो निर्वाचनमंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाऊमंसिर ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
फेरि पनि सपनाकै खेती !मंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
गाँजा पार्टनरमंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्